Ikhabhinethi entle ngasemlanjeni
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguAisling
Nokuba lixesha elifutshane lokuhlala okanye ixesha lokuba uphumle kwaye wonwabele ubumnandi be-Sligo, iKhabhinethi yethu eNgcono yindawo yakho. Ngemoto ukufutshane neMarkree Castle, iCoolaney yokukhwela ibhayisekile entabeni, iStrandhill yokusefa, iBenbulben yokuhamba ngeenyawo kunye neSligo kwiindawo zokutyela ezinkulu, iikhefi kunye neepubs zesiNtu zaseIreland. Sinikezela ngendawo yokuhlala ekhululekile kunye neyamkelekileyo kwindawo yendalo enemithi, amadlelo kunye nomlambo oza kuyihlola.
Unemfihlo epheleleyo kodwa sikufutshane ukuba usidinga ngayo nantoni na.
Kukho ikhitshi eline hobhu yombane, ifriji enebhokisi yomkhenkce. Ishawa yombane yombane kwigumbi lokuhlambela. Amanzi ashushu ekhitshini nasezitephini zangasese. Itafile kunye nezitulo zokutya kunye nezitulo zeengalo ezikhululekile zokuphumla.
Ibhedi imiselwe njengesayizi ye-Super King ngaphandle kokuba iceliwe njengeebhedi ezimbini ezingatshatanga.
Kukho impompo yangaphandle elungele ukucoca izixhobo zokusefa kunye nezixhobo zokukhwela ibhayisekile entabeni kunye nendawo yokugcina nokomisa.
Sakhe iKhabhinethi eNtofontofo sigxininisa kuzinzo kodwa sigcina intuthuzelo nokufudumala, ke ngoko sizamile ukufumana imathiriyeli ebuyiselweyo, ukunyusa umgangatho, ukuyibuyisela kwakhona kunye nokusebenzisa kwakhona kangangoko sinakho.
Sinendawo yokuqokelela amanzi emvula kwisixhobo sokuvula amanzi esifakwe ngqo kwiqula kwaye sisebenzisa umbane "oluhlaza". Ukurisayikilishwa kwenkunkuma kunye nokwenza umgquba yinxalenye yendlela esiphila ngayo.
Sityala eyethu imifuno kwigadi yethu kunye nepolytunnel ejikelezwe ngamatyholo eziqhamo nemithi. Iinkukhu zethu ezizula simahla zisinika amaqanda amatsha kwaye iinyosi zethu zisigcina kubusi.
Kukho indawo eninzi esijikelezileyo kodwa sikwasondele kakhulu kwi-Sligo 20mins, i-Knock Airport 30mins, i-Markree Castle 7mins, i-Coolaney mountain bike trail 7mins, i-Strandhill 25mins ukuba sinokuba naphi na ngokukhawuleza. Yeyona nto intle kuwo omabini ehlabathi!
Kukho intaphane yendalo ejikelezayo ngamaxesha ahlukeneyo onyaka ekufuneka ijongwe, ukusuka kwigorha eliloba iintlanzi emlanjeni ngelixa amadada edada edada, ukuya kuzo zonke iintaka ezincinci nezinkulu, ezihlala egadini yethu. Ebudeni beenyanga zasehlotyeni isibhakabhaka sinyakazela oohlabamanzi abamibalabala neempukane ezibizwa ngokuba zii-damson flyes ngoxa amabhabhathane ebhabha nawo.
Ngobusuku obucacileyo unokujonga inkwenkwezi, ukwazi ukubona iMilky Way kunye namakroza ahlukeneyo esibhakabhakeni ebusuku.
Ifriji yeundercounter fridge with ice box
singqongwe ngamasimi nomlambo ngoko ke kuthe cwaka. Asinabo abamelwane abasijongileyo nangona bekufutshane. Ukufikelela kulula kakhulu ngaphandle kwendlela enkulu.
Siya kuzama ukudibana nawe ngexesha lokuhlala kwakho kwaye siya kuhlala siqhagamshelwa ngefowuni.
Sinenkqubo yokuzijonga ngokwakho ukuze ube bhetyebhetye wokufika xa ikufanele emva kwe-3pm.